एमजनमा रोजगारी ? कर्मचारी भर्नामा सोधिने तीन प्रश्न | गृहपृष्ठ
Home रोजगारी एमजनमा रोजगारी ? कर्मचारी भर्नामा सोधिने तीन प्रश्न
on: ११ आश्विन २०७५, बिहीबार ०८:५६ रोजगारी
विश्वमा कामका लागि सबैभन्दा धेरै खोजिने कम्पनीमध्ये पर्छ अमेरिकी अनलाइन खुद्रा कम्पनी एमजन । अहिले यसले विश्वभर ५ लाखभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी दिइरहेको छ । शुरुआती दिनमा कम्पनीको मुख्य कार्यालय संस्थापक तथा सीईओ जेफ बेजोसको ग्यारेजबाट सियाटलको एक घरमा सर्दा निकै थोरै कर्मचारी थिए । सन् १९९५ मा एमजन १० जना कर्मचारीको एउटा समूह मात्रै थियो । त्यतिबेला बेजोस आफै सामान पुर्‍याउन जान्थे । कम्पनी सन् १९९७ मा शेयर बजारमा सूचीकृत भयो । त्यसको १ वर्षपछि बेजोसले कर्मचारी भर्ती गर्न तीनओटा प्रश्नको साधारण ढाँचा तयार पारे । सो ढाँचा सन् १९९८ मा शेयरधनीहरूलाई पठाइएको पत्रमा समेत उल्लेख गरिएको छ । ‘इण्टरनेटको गतिशील वातावरणमा असाधारण व्यक्तिविना चाहेजस्तो नतीजा/उपलब्धि हासिल गर्न असम्भव नै हुन्थ्यो होला,’ पत्रमा बेजोसले लेखेका थिए । २० वर्षअघि व्यक्त उनको यो भनाइ अहिले पनि एमजनमा लागू हुन्छ । आज पनि कुनै कर्मचारीलाई भर्ती गर्नुप¥यो भने त्यही ढाँचा प्रयोग हुन्छ । ती हुन् :
१. ‘तपाईं यो व्यक्तिको प्रशंसा गर्नुहुन्छ ?’
बेजोस सबैभन्दा पहिला सम्भावित कर्मचारीबारे व्यक्तिगत धारणा विकास गर्न कर्मचारी भर्ती गर्ने अर्थात् एचआर विभाग अधिकृतलाई प्रेरित गर्दछन् । ‘म सधैं आफूलाई राम्रा लाग्ने, आफूले प्रशंसा गर्ने मानिससँग मात्रै काम गर्ने प्रयास गर्छु । कम्पनीमा अरूलाई पनि यस्तै बानीको विकासका लागि प्रेरित गर्छु’ २ दशकघि सो पत्रमा बेजोसले लेखेका छन् । हामी आफूले केही सिक्न सक्ने वा उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने मानिसको मात्र प्रशंसा गर्छौं । यस्तो सोच राख्नेमा बेजोस एक्लै छैनन्, सामाजिक सञ्जाल फेसबूक इङ्कका सीईओ मार्क जुकरबर्ग पनि यस्तै सोच्छन् ।
२. ‘यो व्यक्तिले उसले काम गर्ने समूहको कुशलताको औसत स्तर उठाउँछ त ?’
यो प्रश्नमार्फत व्यक्तिको सृजनशील क्षमता र नवप्रवर्तन अपनाउन सक्ने क्षमता मापन गर्न खोजिएको छ । हरेक अन्तरवार्तामा एमजनमा अबको ५ वर्षमा कम्पनी कहाँ पुग्ला भन्ने कल्पना गर्न लगाइन्छ । कम्पनीको स्तर देखेर आफैलाई गर्व लाग्नुपर्छ भन्छन् बेजोस । एमजनमा ‘लीडरहरू’को स्तर अति उच्च छ । यो निरन्तर बढ्दै गएको छ । धेरैले यसलाई अनावश्यक तरीकाले उच्च भएको पनि भनेका छन् ।
तर, लीडरहरूले यसलाई निरन्तर बढाउनुका साथै आफ्ना टीमलाई उच्चस्तरीय वस्तु, सेवा र प्रक्रिया डेलिभर गर्न प्रेरित गरिरहेका छन् । कम्पनीले सबैभन्दा राम्रा र प्रतिभावान् कर्मचारी नियुक्त गरेको छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न एमजनले वर्तमान कर्मचारीमध्येबाट ‘बार रेजर्स’ नामक छुट्टै समूह पनि स्थापना गरिएको छ । यो समूहमा कम्पनीका विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीलाई राखिएको छ । यिनीहरूले आफ्नो दैनिक कामका साथै नवनियुक्त कर्मचारी कम्पनीको संस्कृतिमा उपयुक्त छ कि छैन भन्नेलगायत विचार पनि दिन्छन् ।
३. ‘यो व्यक्ति कुन पक्षमा सर्वोत्कृष्ट होला ?’
कर्मचारी नियुक्त गर्दा उनीहरूको व्यक्तिगत प्रतिभाको पहिचान पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण ठान्छन् बेजोस । ‘कयौं व्यक्तिमा अद्वितीय शीप, रुचि र दृष्टिकोण हुन्छ, जसले हामी सबैको काम गर्ने वातावरण समृद्ध पार्छ, जुन तिनीहरूको कामसँग सम्बन्धित नहुन पनि सक्छ’ पत्रमा बेजोसले लेखेका छन् । व्यक्तिको त्यो विशेष गुणले उसले गर्ने काममा धेरै मद्दत त नगर्ला, तर काम गर्ने वातावरणलाई भने बढी रमाइलो बनाउन सक्ने धारणा उनको छ ।